Iyada oo 80% dadka si buuxda loo tallaaley, Singapore waa waddanka ugu tallaalka badan adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Singapore » Iyada oo 80% dadka si buuxda loo tallaaley, Singapore waa waddanka ugu tallaalka badan adduunka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Singapore • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Gaaritaanka dhacdadan taariikhdu waxay dejineysaa marxaladda sii-dejinta sii-haynta xannibaadaha la xiriira COVID-19 ee Singapore.
80% dadka Singapore ayaa si buuxda u tallaalay.
Singapore si loo yareeyo xannibaadaha la xiriira masiibada COVI 19.
Muwaadiniinta Singapore iyo dadka deggan ayaa loo oggolaan doonaa inay mar kale safraan.
Singapore waxay noqotay waddanka ugu tallaalka badan adduunka iyadoo 80% ka mid ah 5.7 milyan oo qof oo si buuxda looga tallaalay COVID-19, mas'uuliyiinta dowladda-jasiiradda ayaa sidaas sheegay.
Wasiirka Caafimaadka ee Singapore Ong Ye Kung
"Waxaan ka gudubnay marxalad kale, halkaas oo 80% dadkeenna ay heleen dawadooda buuxda oo ah laba qiyaasood," Singapore's Wasiirka Caafimaadka Ong Ye Kung ayaa sidaa ku sheegay qoraal uu soo dhigay Facebook shalay.
“Waxay ka dhigan tahay Singapore ayaa qaaday tallaabo kale oo hore loogu qaaday si aan nafteena ugu adkeysanno COVID-19. ”
Horumarka ayaa siinaya magaalo-yar-yar heerka ugu sarreeya ee tallaallada dhammaystiran.
Dalalka kale ee leh tallaalka aadka u sarreeya waxaa ka mid ah Imaaraadka Carabta, Uruguay iyo Chile, kuwaas oo si buuxda u tallaalay in ka badan 70 boqolkiiba dadkooda.
Sida ay saraakiishu sheegeen, shirar waaweyn sida Tirinta Sannadka Cusub ayaa dib u bilaaban doona “ganacsataduna waxay hubaal ahaan doonaan inaan hawlahooda la carqaladayn”.
Dadka reer Singapore ayaa sidoo kale loo oggolaan doonaa inay mar kale u safraan, ugu yaraan waddamada sidoo kale xakameeyay fayraska.
Singapore, oo ololaheeda tallaalka billowday bishii Janaayo, waxay inta badan ku tiirsanayd jabsadii ay sameeyeen Pfizer-BioNTech iyo Moderna.
Singapore waxay diiwaangelisay wadar ahaan 67,171 xaaladood iyo 55 dhimasho tan iyo markii masiibada bilaabatay.